Salman Khan Oo Jawaab Cajiib Ah Siiyey Varuun Dhawan ”Tallow Maxaa Leeys Dhaafsaday Labadaan Jilaaa?
Waxaa Qoray Maxamuud Jamuuni / Waxaa La Daabacay Wednesday, 06 Dec 2017 08:14 AM / No Comments
Maalmahaan qaar kamid ah jilaayaasha Bollywood-ka ayaa ku mashquulsanaayeen xaflado kala duwan , waxaana ay taasi keeneysey in qaar kamid ah jilaayaasha ay fursad isku helaan oo qof walba uu ka hadlo qofka uu jecelaa xilliga uu Bollywood-ka kusoo biirayey.
Varuun Dhawan waxaa uu ku jiraa jilaayaasha dhawaan galka ah Bollywood-ka ,waxaana uu daawan jiray Salman Khan iyo qaar kamid ah jilaayaasha hadda dhaafeen da’da 50 sano.
Waxaa dhacday inuu si toos ah u sheegay inuu taageero u ahaan jiray Salman Khan kadib markii fursad loo siiyey inuu ka hadlo xafladdii Screen Awards.
”Waxaan ahay taageerahaaga weyn ,” ayuu yiri Varun Dhawan .. Kadib Salman Khan ayaa u jawaabay Varuun Dhawan , waxaana uu yiri ”Qofka keliya ee ku faana taageerinnimada , meel sare ayaad ka joogtaa dhankeyga.
Jawaabta uu Salman Khan ka bixiyey arintaas ayaa sababtay in la hadalhaayo sheekadaas maxaa yeelay Salman Khan , waxaa uu mar walba jecel yahay inuu hormariyo shaqsiyaadka hadda soo korayaan ee u baahan inay meel fiican ka gaaraan Bollywood-ka.
Salman Khan ayaa hadda ku mashquulsan filimka la wada sugayo ee Tiger , waxaana uu filimkaan sameeyey saameeyn xoogan marka laga hadlo awoodiisa gaarka ah ee uu yeeshay Goos Gooska iyo qaar kamid ah heesaha filimkaan.